Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Burmese ( Burma ) Myanmar-Army
at 3/30/2014 12:42:00 PM
credits: Yo Ma Ya
Without any support, burmese army can't control the country so long! Many burma say they hate their army. But they sent their son to army to become army officer. See army officer entrance exam. Every year!!!
ဒီအတွေးအခေါ်ကို ကျုပ်အသိအမှတ်ပြုတယ်.. အရင် အလားဆင်တဲ့ မှတ်ချက်ကို
ကျုပ်လည်း ရေးဖူးတယ်.. အစိုးရတစ်ရပ် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်အောင်လို့ နောက်က
ထောက်ခံပေးတဲ့ ကျောရိုးတစ်ခုရှိကိုရှိတယ်၊၊ အဲဒီ ကျောထောက်နောက်ခံဟာ
အခု လစ်ဘရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗမာတွေထက် အင်အားကြီးတယ်၊၊
ဒါကို ဗမာတွေ မြင်အောင်ကြည့်ရပါမယ်၊၊ တခြားဖြစ်ချင်ရာဖြစ်.. ဗမာပြည်
မပျက်ရင် (ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး) ကို ဦးထိပ်ပန်တဲ့ ဗမာတွေ အများကြီးပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ ကချင်ပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ ကရင်နီပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ ချင်း ပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ မွန် ပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ ရခိုင်ပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
ဗမာပြည်မပျက်တာဟာ ရှမ်းပြည်ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ၊၊
အဲဒါ လက်ရှိ ပစ္စုပန်အခြေအနေပါပဲ၊၊
FB ah hpu